Job Fair Myanmar | Myanmar Job Fair
Job Fair Myanmar 2017
We’re coming soon.
ITနည်းပညာရှင်အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက်
JobFair @ Mandalay
Place: Myanmar Institute of Information Technology
Date: 2017 Oct 07 (Saturday)
JobFair @ Yangon
Place : International Business Center(IBC)
Date : 2017 Oct 08 (Sunday)
GIC Myanmar မှနှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိသော ၀န်ထမ်းရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနားကို၂၀၁၇ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၇ရက်(စနေ)တွင်မန္တလေးမြို့၌တစ်ကြိမ်၊၂၀၁၇ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၈ရက်(တနင်္ဂနွေ) GIC Myanmar မှနှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိသော ၀န်ထမ်းရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနားကို၂၀၁၇ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၇ရက်(စနေ)တွင်မန္တလေးမြို့၌တစ်ကြိမ်၊၂၀၁၇ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၈ရက်(တနင်္ဂနွေ) တွင် ရန်ကုန်မြို့၌တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်ခွဲပြီး ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
ယခုနှစ်တွင် (၆)ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ်များတွင်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံမှ IT Company များ(၁၀ခုကျော်)၏ လုပ်ငန်းခွင် ရှင်းလင်းပွဲ နှင့် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း အခမ်းအနားများကျင်းပခဲ့ပြီး များစွာသောမြန်မာလူငယ်များ အလုပ်အကိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဂျပန် IT System Development ကုမ္ပဏီများတွင် Programmer ၊ System Analyst ၊ Project Managerအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသော မြန်မာလူငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခမ်းအနားတွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ဂျပန်ITကုမ္ပဏီများအကြောင်းကို လေ့လာနိုင်သလို၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားခြင်း ပထမအဆင့်အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သော ရေးဖြေစာမေးပွဲကို အခမ်းအနားကျင်းပသည့်နေ့တွင် ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့စိတ်ဝင်စားသောကုမ္ပဏီများ၏ boothsများသို့လှည့်လည်ပြီး သိလိုသော မေးခွန်းများကို
ဂျပန်ITကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသော လူငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးများနှင့် ကုမ္ပဏီများ
ကြိုတင်လျှောက်လွှာတင်ရန် အချိန်မရလိုက်တဲ့သူများ၊ကုမ္ပဏီရှင်းလင်းပွဲကိုနားထောင်ပြီး စိတ်ဝင်စားပါက အခမ်းအနားနေ့ တွင်လဲလျှောက်လွှာတင်နိုင်ပါသည်။
08:30 ~ 08:40 အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားခြင်း
08:40 ~ 09:00 ရေးဖြေစာမေးပွဲ IQ Test အကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း
09:00 ~ 12:00 ကုမ္ပဏီအသီးသီးမှ ကုမ္ပဏီအကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း
12:00 ~ 14:00 ကုမ္ပဏီအသီးသီးသို့သွားရောက်ပြီးလွတ်လပ်စွာမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း
14:00 ~ 14:20 ရေးဖြေစာမေးပွဲ IQ Test အကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း
14:20 ~ 14:30 အခမ်းအနားပြီးစီးကြောင်းကြေညာခြင်း
15:00 ~ 18:00 ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆုိုခြင်း
*ဂျပန် IT Company များသာပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီအကြောင်းရှင်းလင်းချက်များကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။မိမိတို့စိတ်ဝင်စားရာ ကုမ္ပဏီ၏Boothများတွင် သိလိုသောမေးခွန်းများကို တိုက်ရိုက်
မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။အလုပ်အကိုင်ရှင်းလင်းပွဲကို 8:30 ~ 14:30 အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သောကြောင့် မိမိတို့အဆင်ပြေသောအချိန်တွင် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
2017 Oct 7th(Mandalay)နှင့်8th (Yangon) တွင်ကျင်းပမည့် JobFair တွင် ပါဝင်မည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Profile မိတ်ဆက်-Part 1010.Robotcom Corp. URL : http://robotcom.jp/လက်တလော labor shortage နှင့် အလုပ်စတိုင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်နေရသော ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်...
SEVEN SYSTEM Co.,Ltd.
2017 Oct 7th(Mandalay)နှင့်8th (Yangon) တွင်ကျင်းပမည့် JobFair တွင် ပါဝင်မည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Profile မိတ်ဆက်-Part99.SEVEN SYSTEM Co.,Ltd. URL : http://www.seven-sys.co.jp/ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ဟောင်းဖြစ်သော ကျိုတိုမြို့တွင်ရုံးချုပ်တည်ရှိပြီး...
SystemTrust Co., Ltd.
2017 Oct 7th(Mandalay)နှင့်8th (Yangon) တွင်ကျင်းပမည့် JobFair တွင် ပါဝင်မည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Profile မိတ်ဆက်-Part 8 8.SystemTrust Co., Ltd. URL : http://www.system-trust.com ကုမ္ပဏီ၏အားသာချက် ●ဂျပန်တွင်သာမက...
Vision Links Myanmar Co., Ltd
2017 Oct 7th(Mandalay)နှင့်8th (Yangon) တွင်ကျင်းပမည့် JobFair တွင် ပါဝင်မည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Profile မိတ်ဆက်-Part 77.Vision Links Myanmar Co., Ltd URL : http://visionlinksm.co.jp/Vision Links Myanmar သည် Japan IT Company Group (MIT Holdings Group) ရဲ့ Myanmar Local...
2017 Oct 7th(Mandalay)နှင့်8th (Yangon) တွင်ကျင်းပမည့် JobFair တွင် ပါဝင်မည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Profile မိတ်ဆက်-Part66.ENCOURAGE Co., Ltd.URL : http://www.enc-jp.com/ စီးပွားရေးအပြောင်းအလဲနှင့်လိုက်ပြီး Customer များဧ။်လိုအပ်ချက်အလိုက် Project Team ကိုထောက်ပံ့ပေး၍၊...
2017Oct 7th(Mandalay)နှင့်8th (Yangon) တွင်ကျင်းပမည့် JobFair တွင် ပါဝင်မည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Profile မိတ်ဆက်-Part55.Computer Science Corporation URL : http://www.cscnet.co.jp/Business System Constructionအတွက် အထူးပြုတဲ့ system integratorတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။...
Arche Information Inc.
2017Oct 7th(Mandalay)နှင့်8th (Yangon) တွင်ကျင်းပမည့် JobFair တွင် ပါဝင်မည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Profile မိတ်ဆက်-Part44.Arche Information Inc. URL : http://www.arche1.co.jp/mm/index.html 1．ဂျပန် နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများကို အောက်ပါ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။...
Socio Diversity Co., Ltd.／Socio Diversity Myanmar Co., Ltd.
2017 Oct 7th(Mandalay)နှင့်8th (Yangon) တွင်ကျင်းပမည့် JobFair တွင် ပါဝင်မည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Profile မိတ်ဆက်-Part33.Socio Diversity Co., Ltd.／Socio Diversity Myanmar Co., Ltd. URL : http://www.socio-diversity.co.jp/ Socio Diversityသည်...
2017Oct 7th(Mandalay)နှင့်8th (Yangon) တွင်ကျင်းပမည့် JobFair တွင် ပါဝင်မည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Profile မိတ်ဆက်-Part 1 1.TOSCO CORPORATION URL : http://www.tosco.co.jp/ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီသည် System Development ကိုအဓိကထား လုပ်ဆောင်နေသော အိုင်တီကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။...
GIC Myanmar Co.,Ltd.
2017Oct 7th(Mandalay)နှင့်8th (Yangon) တွင်ကျင်းပမည့် JobFair တွင် ပါဝင်မည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Profile မိတ်ဆက်-Part22.Global Innovation Consulting Inc./ GIC Myanmar Co., Ltd. URL : http://www.gicjp.com/ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီသည် ဂျပန်တွင်မြန်မာလူမျိုး No.1 အများဆုံး ဂျပန် IT...
၁။ လျှောက်လွှာတင်ချိန်တွင်ရရှိလာသော လျှောက်လွှာဖြတ်ပိုင်းကို သေချာစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။
၂။ ရေးဖြေစာမေးပွဲသည်အခမ်းအနားကျင်းပမည့်ရက်တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်နှင့် နေရာသည် လျှောက်လွှာဖြတ်ပိုင်းတွင် ပါရှိပါသဖြင့် သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
၃။ လျှောက်လွှာဖြတ်ပိုင်းတွင် မိမိလျှောက်လိုသောကုမ္ပဏီအမည် ဦးစားပေး(၁)နှင့် ဦးစားပေး(၂)ကို စာမေးပွဲမဖြေဆိုမီတွင် မပျက်မကွက်ဖြည့်စွက်ပါ။
၄။ ရေးဖြေစာမေးပွဲကိုအောင်မြင်ပါက မိမိတို့လျှောက်လွှာတင်ထားသော ကုမ္ပဏီမှဒုတိယအဆင့် အင်တာဗျုးဖြေဆိုရမည့်နေ့ကို အကြောင်းကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
*ရေးဖြေစာမေးပွဲမဖြေဆိုပါက မိမိတို့၏လျှောက်လွှာများကို ကုမ္ပဏီများမှထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါသဖြင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့် နေရာကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပြီး လာရောက်ဖြေဆိုပါရန်။
လျှောက်လွှာတင်ခြင်း(29.8.2017 ～ 30.9.2017)
Ⅰ.GIC Myanmar(Head Office) & GIC Myanmar (Madalay Office)တွင်လူကိုယ်တိုင်လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းခြင်း
※ စာရွက်စာတမ်းအားလုံးအား A4 sizeဖြင့် ယူဆောင်လာရန်။
GIC Myanmar Co.,Ltd.(Head office)
Contact Address : No.177/179,Room No.101/102
1Floor34th Street Upper block,
Kyauktada Township ,Yangon
TEL : +95-9-972425310
GIC Myanmar Co.,Ltd.(Madalay)
Contact Address : No.A5, SinLanMa Street, Bet 18x19 & 57x58,
Nanshae,Shwe Nan Taw Housing,
Aung Myay Thar Township, Mandalay
TEL : +95-9-423385177
Ⅱ.JobFair Myanmar Websiteမှတဆင့်စာရင်းပေးသွင်းဖြင်း
Apply Formမှတဆင့် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
Powered by Global Innovation Consulting Inc.,